येसरी धोका दिय प्रचण्ड ले ओली लाइ ९-९ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा र प्रचण्डको गोप्य सहमति – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / येसरी धोका दिय प्रचण्ड ले ओली लाइ ९-९ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा र प्रचण्डको गोप्य सहमति
येसरी धोका दिय प्रचण्ड ले ओली लाइ ९-९ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा र प्रचण्डको गोप्य सहमति
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर July 13, 2016	Comments 349 Views
२९ असार, काठमाडौं ।
बाहिर सात बुँदे सहमति गरेको देखाए पनि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तीनवटै चुनाव दुई पार्टीले गर्ने गरी सहमति भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा ओली सरकार गिराउन लागेका विमलेन्द्र निधिले यो खुलासा गरेका हुन् ।
धोका दिंदै आएको माओवादीले फेरि पनि धोका दिन सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका बेला निधिले माओवादीसँग दीर्घकालीन सत्ता साझेदारीबारे बोलेका हुन् । ‘अबको माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै गर्ने हो’ निधिले बैठकमा भने, ‘त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ र त्यसले प्रदेशको पनि चुनाव गर्छ र संसदको पनि चुनाव गर्छ । यो सात बु“देमा यी विषय छैनन् तर, अर्को तीन बुँदे सहमतिमा यी विषय उल्लेख छन् ।’
यसरी गरिएको सत्ताभागबण्डामा प्रचण्डलाई ९ महिना भाग परेको छ । यता देउवालाई पनि ९ महिना नै परेको छ । प्रचण्डले स्थानीय निकायको चुनाव गरेपछि उनी फेरिनेछन् । र चैतपछि कांग्रेसबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि यो संसदको आयु रहेको समय अर्थात् २०७४ माघसम्म प्रदेशको चुनाव गरिसकेर केन्द्रको तल्लो तहको सदनको चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ । यसका लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौति देखिएको छ । सात बुँदे र तीन बुँदे सहमति गर्नका लागि कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा लागेका थिए ।
सजिलो छैन नयाँ सरंचनासहितको स्थानीय चुनाव
यस अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्दा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । तर, अब प्रदेशको सीमांकन, मिलाएर स्थानीयपालिका चुना गराउन भने सहज छैन । किनकी सीमांकन निक्कै जटिल बन्दै गएको छ । सीमांकनलाई आयोग नै गठन भए पनि यसले यो जटिल विषयमा सहमति जुटाएर चैतभित्रै सीमांकन तोक्न सहज छैन ।
स्थानीय पालिका नबन्ने र चुनाव पनि हुने अवस्था आयो भने कांग्रेस र माअ‍ोवादीबीचको यो सहमतिको हावा खाने देखिन्छ । र, गठबन्धनमा नै समस्या आउनेछन । सरकारलाई कमजोर बनाइ गठबन्धन टुटाउन त्यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने एमालेले असहयोग गर्न सक्नेछ । तल्लो तहमा स्थानीयपालिका बनाउँदा कति गाविसलाई मिलाउने भन्नेमा नै विवाद छ । कही एउटै गाविस ठूला छन् भने कहीं असाध्यै साना गाविस छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीयपालिका कति वटा हुने, सीमाकंकन जिल्ला नटुक्र्याए कसरी गर्ने भन्नेमा पनि समस्या छ ।
यसरी देउवा र प्रचण्ड मिले पनि सीमाकंनमा दशतिर मुख फर्किएका दलबीच सहमति भएर स्थानीयपालिका नै बन्न सबैभन्दा जलिट विषय छ । यस्तो जटिलताले यी दुई दलबीचको गठबन्धनमा असर पुर्याउने आँकलन गर्न थालिसकिएको छ ।
माओवादीसंग सत्तामा जोडिनै लाग्दा गरिएको सहमतिप्रति कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महतसहितका नेताको विरोध छ । पहिले विधिमा पार्टी चलाउनुपर्छ भन्दै राजनीति गरेका देउवाले नै आफूखुशी माओवादीसंग सहमति गरेको आरोप उनीहरुले बुधबारको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा लगाएका थिए । आफूखुशी यस्तो गर्न नहुने भन्दै आइन्दा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नका लागि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
Previous: योनीबाट किन बग्छ सेतोपानी ? के हुन त रोकथाम का उपाय ?
Next: ओलीले भन्नेछन्ः बादरलाई मान्छे बनाउन खोजेको सकिएन